XOG: Ciidamada Difaaca PL oo howlgalo ka wada Xeebaha G Mudug, Maxaase soo kordhay? – Puntlandtimes
XOG: Ciidamada Difaaca PL oo howlgalo ka wada Xeebaha G Mudug, Maxaase soo kordhay?
GARACAD(P-TIMES)- Ciidamada Difaaca Puntland ee kusugan xeebaha gobalka Mudug ayaa wada howlgalo ay ka sameynayaan deegaanada Xeebleyda ee gobalkaas, ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maleeshiyaad katirsan kooxaha Argagixisada ah ay isku aruursanayaan deegaano kuyaala xeebaha Koonfureed ee gobalka Mudug, ayna doonayaan in ay falal Argagixiso abaabulaan.
Goobjoogayaal kusugan magaalada Garacad ayaa sheegay in aysan jirin wararka sheegaya in ay maleeshiyaadka Argagixisada ay isku dayi karaan weeraro Argagixiso, balse ay ciidamadu ku jiraan feejiganaan ay waligoodba ku jiraan.
Dawladda Puntland ayaa saldhig ciidan ka hirgalisay deegaanka Garacad, wixii ka dambeeyey 2016-kii xiligaas oo ay maleeshiyaad badan oo katirsanaa Al- Shabaab, maleeshiyaad badan kala soo dageen xeebta magaaladaas.
Xogo la helay todobaadkan ayaa daaha ka rogaya in weerar ujeedooyin badan leh oo ay dhinacyo badan iska kaashanayaan kusoo wajahan yahay Puntland, kaas oo garwadeenka koowaad iyo 2aad ka yihiin Somaliland & Al- Shabaab isku xiran.
Xogta waxaa lagu ogaaday in ay maleeshiyaad is aruursaday suuragal ay tahay in ay sameeyaan ficilo Argagixiso, taas oo ay ciidamada Puntland heegan buuxa uga jiraan, ayna doonayaan in ay amniga xaqiijiyaan.
Maamulka xeebaha gobalka Mudug waxay beeniyeen in ay wax ka jiraan wararkaas, waxayse sheegeen in ay feejigan yihiin oo ay mar kasta maanka kuhayaan arrimaha ka taagan deegaanadooda.